दलान नेपाल : विरगंजको तस्वीर - कसरी भडक्यो विरगंज ?
विरगंजको तस्वीर - कसरी भडक्यो विरगंज ?
आइतवार वेलुकि सम्म शान्त प्रर्दशनमा रहेको विरगंज एक्कासी सोमवार विहान देखि उग्र देखिए । प्रहरी र प्रर्दशनकारी विचको झडपमा हिजो र आज गरी ५ जनाको मृत्यु पर्सामा र १ जनाको वारामा भईसकेको छ । ४० जना वढी धाईते भएका छन । झण्डै आधा दर्जनलाई उपचारका लागी काठमाडौ ल्याइएको छ । गएको तीन साता देखि विरगंजमा शान्त रुपमा आन्द्योलन चल्दै थियो । यती सम्मको कोई धाईते समेत भएका थिएन । तर एक्कासी सोमवार देखि अत्यद्यीक तनावमा देखिए । मंगलवार दिउसो सरकारले विरगंजलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर विरगंजका बासीहरु चार दिन अघि देखि नै सेनाको परेडहरु विहान विहानै देख्न थालेका थिए ।
चार ओटा मधेशी पार्टीहरु फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावना र तमसपा सम्मलीत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाईमा मधेशमा प्रर्दशनहरु आन्द्योलन सुरु भए यता हुदै आएको थियो । विचमै सम्भवतह आन्द्योलनमा आफुहरुको कम सहभागीताको अनुभुती गरेका अनिल झा, मातृका यादव सहितको छुटै संघिय मधेशी मोर्चाको घोषणा भयो । जुन मोर्चाको अगुवाईमा विरगंजमा दे्खिए शिव पटेल, शशी मिया कपुर जस्ता पहिलो मधेश विद्रोहका अगुवाहरु । आन्दोलनमा आफुहरु अघि हुनु पर्छ भन्ने होडवाजीका कारण उनीहरुले मधेशी मोर्चा भन्द्या भिन्न तर कडा समानान्तर कार्यक्रमहरु विरगंज क्षेत्रहरुमा गर्न थाले । दुवै पक्षमा कसको आन्द्योलानको चर्को भन्ने होडवाजी नै सुरु भएको विरगंजका केही स्थानिय अगुवाहरु वताउछन । यता प्रहरीले राती राती स्र्किटगं गरेर तेल तथा मालवाहक गाडीहरु पठाई नै रहेका थिए ।
तर दुइ पक्षमा आन्द्योलनको होडवाजी चले पछि प्रहरीले निषेध आज्ञा जारी गर्न पुगे । अघिल्लो हप्ता मालवाहक गाडी राती रोक्नका लागी ५० दे्खि ६० जनाको भिडले वाटो छेक्दै केही तोडफोडको प्रयास गरे । त्यही राती प्रर्दशनकारीको दुगांमुढावाट विरगंजका एसपी समान्य धाइते भए । जसलाई प्रर्दशनकारीहरुको तर्फवाट स्थानिय स्तरमा व्यापक मिडियावाजी गराइयो । जसले स्थानिय प्रहरी प्रशासन तीव्र आक्रमक बन्न पुगे । गएको आइतवार मधेशी मोर्चाको शिर्ष नेताहरु को वाराको कलैयामा सामुहिक सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसैलाई चाल पाएर अर्को मोर्चाका नेताहरु विरगंजमा आफुहरुको शक्ति प्रर्दशन देखाउन नगवा वाईपासमा वेलुकी टेन्ट नै हालेल वाटो छेक्न कोसीस गरे । पछि प्रहरी संगको भनाभन पछि दुवै पक्ष आ आफनो वाटो लागे ।
तर त्यही नगवाका क्षेत्रका स्थानियहरुको घरहरुमा राती हेटैडावाट विरगंज गएको सशस्त्रको एउटा टोलीले घर घरको मुल दोकाहरुमा खुटाले हिर्काउने देखि वाहिर भेटनेलाई कुटपिट गरे । नगवा पहिलो मधेश आन्द्योलनमा पनि व्यापक हिंसं्रक रुपमा प्रसतुत भएको विरगंजको इलाका हो । राती सशस्त्र प्रहरीवाट अनावश्यक दबाब खेपेका नगरवावासीहरु सोमवार विहानै देखि विरगंजमा उग्र प्रर्दशनमा उत्रे । यता सोमवार मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताको पनि विरगंजमा कार्यक्रम थियो तर विहानै देखि प्रर्दशन यती चर्कोयो कि मो्र्चाको शिर्ष नेताहरुको कार्यक्रम नै हुन सकेन । शिर्ष नेताहरु होटलमा थुनिए ।
यता नगवा क्षेत्रमा आन्द्योलन जसरी चर्कोयो दुवै मोर्चाले त्यसलाई नेतृत्व गर्न खोज्न जुहारी गरे । विरगंजका स्थ्ति केही अगुवाहरुको बुझाईमा नगवा क्षेत्रमा संघिय मोर्चाले नेतृत्व लिन थाले पछि वजारमा मधेशी मोर्चा छुटै तथा कडा प्रतिरोधात्म्क प्रर्दशनहरु हुन थाल्यो । प्रहरी र प्रर्दशाकारीहरु विचमा विरगंजको ठाउमा झडप हुदै त्याहा अवस्था पुरै अनियन्त्रीत बन्न पुग्यो । उता विहानै सशस्त्र प्रहरीले वजारमा पनि केही मानिसहरु संग नराम्ररी दुव्र्यवहार गरेका थिए । जसका कारण वजार क्षेत्रमा पनि आक्रोश वढदै गईरहेको थियो ।
अवस्था पुरै अनियन्त्रीत भए पछि सोमवार दिउसो प्रहरीले क्फूर्य लगाएको घोषणा गरे । तर त्यस पछि थप तनावहरु सिर्जना भयो जुन अवेर राती सम्म चलीरह्यो । प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरी चोकी, सरकारी कार्य कार्यलय, एमाले पार्टी कार्यलय सहित प्रहरी प्रशासनको केही केही गाडीहरुमा राती अवेर सम्म आगजनी गर्न थाले । मंगलवार विहानै देखि अवस्था थप उग्र हुन गएको प्रर्दशाकारी र प्रहरी विच दिउसो सम्म झडपहरु भईरहेको थियो । प्रहरीको गोलीवाट दर्जनौ धाईते भए । दिउसो चार वजे देखि विरगंजको मात्रै प्रर्दशनहरु रोकिएका छन । सरकारले दिउसो मात्रै दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि आज विहानै वाट त्याहा सेना उपस्थिती भईसकेको थियो ।
Ojaswi Gautam September 2, 2015 at 12:20 AM
ठूला दल,संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघिय मधेशी मोर्चामा अावद्ध नेताहरूले सरकारले विभाजन गरेकाे राज्यमा भन्दा पनि हिमाल पहाड मधेश संलग्न बहुजातिय विविध पहिचान सहितकाे राज्यकाे लागि उदारता देखाउन अावश्यक छ ।
Paramendra Kumar Bhagat September 2, 2015 at 9:01 PM
गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/09/blog-post_37.html